amazinyo ziwenza | Ndlela Best mhlophe Amazinyo Guide
izithuba ephawulweyo "amazinyo ziwenza"
Kukho iimveliso ezininzi ezingwevu phaya anokukunceda njani ukusilahla amabala okanye amazinyo tyheli. Uya kufumana iziqwenga ziwenza, itreyi ezaliswe whitener okanye ezingwevu imicu. Ezi ndlela zonke iindlela ezinkulu ziwenza yobungcali eninzi.
Amaqunube ingasetyenziswa ngendlela yemvelo ukuba mhlophe amazinyo. Eziphilayo yendalo efumaneka amaqunube ziya mhlophe amazinyo ngaphandle usebenzisa amachiza. Uyakwazi umgrayo lalamaqunube ibe Cola ukuba uyakwazi uhlambe kwi amazinyo akho makhe yahlala imizuzu eliqela emva koko okanye usike namaqunube phakathi, ngoko bawahlikihle kwi amazinyo akho umzuzwana.
ICEBISO! Iziqhamo yindlela enkulu yendalo ukuba mhlophe amazinyo ezinye ixesha. Umzekelo iziqhamo asebenza kakhulu xa ezingwevu amazinyo kuba amaqunube kunye orenji.
Qinisekisa amazinyo zakho lwenzisisiswe icocwe phambi kokusebenzisa ekhaya ezingwevu amazinyo kwirejimeni. Ezingwevu iimveliso amazinyo iya kusebenza kakuhle ukuba isicelo nabo amazinyo. Ukuba amazinyo akho eziziinqambi xa uqala mhlophe kukho ithuba elihle ukuba umphumo uya kuba lazo oluqaphelekayo.
Amazinyo ezingwevu iziqwenga zifumaneka ngokubanzi kwaye ayafikeleleka kakhulu. Kufuneka nje ukubeka ngumcu kwi amazinyo akho, ngoko uzakuwushiya apho ixesha elithile njengoko Icoca kwaye whitens amazinyo akho. Xa ethandwayo, iziqwenga ezingwevu ayaba ubabalwe ezininzi ngenxa yeziphumo ombi kwabo.
ICEBISO! Amazinyo ezingwevu iimveliso unokwenza amazinyo akho novelwano imveliso usebenzisa. Oku buhlungu nangona nje yexeshana.
Kufuneka balumke xa ukutya okanye ukusela emva kokuba ziwenza inkqubo amazinyo kwenziwe. Amazinyo akho uya edyojiweyo lula ukufunxa amabala emva kokuba ziye mhlophe. Kubalulekile ukuphepha mnyama ezimibala ukutya neziselo emva amazinyo akho abasandula mhlophe. Coffee ngumzekelo into eza lula zifunxwe amazinyo akho kunokubangela gqwanci.
Eyona nto ibalulekileyo onokuyenza ukuze ufumane uncumo emhlophe ngokubalulekileyo ukuba uye kugqirha wamazinyo ukuze cleanings rhoqo. Qiniseka ukuba nihambe zonke ezihlambulukileyo 6 kwiinyanga. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba kumiswe njengengqesho entsha ngoxa wamazinyo ukuze musa ukulibala kamva. Buza ofisi wakho wamazinyo ndinikhumbuza kwangaphambili kunye umnxeba.
ICEBISO! Ihlamba amazinyo qho emva kokutya yindlela omkhulu ukugcina lwabakhulula amabala. ukutya ezininzi neziselo zinako ukuba angcolise amazinyo akho.
Thwalani ibrashi encinane ukuba usebenzise emva kokutya ukutya okuneswekile ukun-. Ezi iilekese unamathele amazinyo akho, kwaye kubangela amabala okanye ukongeza koko sele unayo. Emva ukutya iilekese, uhlamba amazinyo akho ngenxa imali elifutshane. Intlama akuyomfuneko; ukhuhle nje amazinyo akho uze pula kakuhle ngamanzi.
Isoda yokubhaka, xa zidityaniswe ne peroxide, yenza intlama esemgangathweni kunciphisa iintsholongwane kwaye akubikho amabala. Zama ukuxukuxa amazinyo akho ngesisombululo phakathi 5-10 imizuzu. Soloko lumkani ukuba awusebenzisi ihlamba ngokugqithiseleyo nzima, njengoko mxube ngokwenene ukubacaphukisa iintsini zakho.
ICEBISO! Enye yeendlela eziphambili ukuqinisekisa amazinyo ahlale amhlophe ukuze amise ukuqeshwa rhoqo ngokundwendwela wamazinyo ukucoca kubo. Ucoco abaqeqeshiweyo kuphela ungenza ingenzeki iminyaka lwethathari kukwakheka kunye gqwanci.
Ukuba amazinyo aqalise ukuntlontlozela okanye uzive ezibuthathaka xa usebenzisa imveliso whitens amazinyo, ukusetyenziswa iyekiw nangoko. Ungaba ukwenza umonakalo ngaphezu uyazi ukuba amazinyo akho, ngoko ke kungcono ngelo xesha ukuze ufumane ingcebiso yobungcali. Buza ugqirha wakho malunga iinketho zakho.
ICEBISO! ubolo rhoqo ukuhlamba amazinyo wakho uphakathi ezona ndlela ngempumelelo ezingwevu amazinyo akho. Ngokusebenzisa ezi ndlela, uya kunciphisa ukubola buildup, umntu esona sizathu amazinyo abe gqwanci.
Soloko kulandela zonke izalathiso iimveliso ziwenza ekhaya usebenzisa. Oku zinganyikila iintsini zakho nomonakalo amazinyo akho teeth.Use ezingwevu iimveliso kanye kwaye kuphela njengoko kuyalelwe kwi umenzi.
Emva unokuvuma amazinyo ezingwevu inkqubo, kubalulekile ukuba uhlambe amazinyo akho qho emva kokutya. Ukuba uvumela ukutya kwakha phezu amazinyo akho, sinokubanga ukukhula ziintsholongwane emlonyeni wakho. Iintsholongwane lokuthambisa amazinyo akho, leyo kubenza ngaphezulu olukwaziyo ukuba umonakalo ukwehla.
ICEBISO! kuphephe imidiza, ikofu neti ngamandla. Ezi zinto ungalucima amazinyo brown yakho.
Ukusela ikofu kunye nezinye izinto ezingamanzi nizikhwebule ngokusebenzisa straw yindlela esebenzayo yokufumana amhlophe mazinyo. Enomququ unika imali ixesha okubangela amazinyo nizikhwebule. Ulwelo iza kukhweza ecaleni amazinyo akho aye ngqo phantsi emlonyeni wakho.
Beka juice strawberry kwi ibhrashi ibhrashi njengesiqhelo mhlophe amazinyo akho. I-asidi ukusuka incindi ithibaza ulandelise lakho izinyo, oko ekwenza ukuba ukucoca kude kakhulu gqwanci evela amazinyo akho. Uya kuba nako ukubuyisela uncumo lwakho nezigidi-dollar ixesha elingaphantsi kwezigidi zeerandi usebenzisa le ndlela.
ICEBISO! Emva ezingwevu amazinyo akho, isicelo Vaseline ukunikhumbuza ukuba uncumile. Kusenokwenzeka ukuba incasa kakuhle, kodwa kulungile ekudaleni si sithelo enika yakho ukhuseleko amazinyo ukusuka nizikhwebule kangange- iiyure.
Hlamba amazinyo akho rhoqo ukuze kuqinisekiswe ukuba ufuna ukugcina uncumo olukhulu. Ukutya kunye nezinye izinto ngakhela amazinyo akho angcolise emva kwexesha elithile. Akufunekanga ukuba ukhathazeke izinyo gqwanci logama nje ukugcina nocwangciso amazinyo-ukuhlamba rhoqo.
Kuphephe ukusebenzisa mouthwashes ezinemibala. Ezi mouthwashes ukuze unuke impefumlo yakho, kodwa mhlawumbi ndasidyobha amazinyo akho kwinkqubo. Utywala yenye yezinto ezininzi, kwaye banokubenzakalisa ulwimi zakho iintsini kwaye uzifake wegazi lakho.
ICEBISO! Ukukukhusela amazinyo yakho uxukuxe kubo. Usenokuba kwakunye ndibuthabathe elinye inyathelo, kwaye uqale usebenzisa intlama whitens amazinyo akho.
Kwakhona kunokubangela ontununtunu kwaye lula ukuba nizikhwebule.
Thetha wamazinyo yakho malunga ndlela zinempilo mhlophe amazinyo akho phambi kokuba ndithenge nantoni na. wamazinyo wakho uya kwazi ukuba zezona ndlela ikho, waza yena okanye yena uya kuba nakho ukukuxelela malunga iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa iinkqubo ezithile ukuze amazinyo ziwenza.
ICEBISO! Yenza umkhwa nokuvungula amazinyo akho. Nokuvungula AIDS ekususeni mbhalo, leyo ebangela imiba gqwanci zamazinyo.
Ukuba emlonyeni wakho iqala ukukhathaza, nangoko uyeke ezingwevu. Ukuba ngaba wehlelwa uvakalelo xa usebenzisa iimveliso ezingwevu, kufuneka ngoko nangoko ukuphelisa ukusetyenziswa kwemveliso elonileyo ude ube uyakwazi kukucacisela wamazinyo.
Kuba amhlophe mazinyo, musa ukusela iti okanye ikofu. Ezi iziselo discolor amazinyo. Ukuba usele ikofu, Qinisekisa ukuba ukupulisha umlomo wakho ngokukhawuleza emva kokuba kwenziwe. Oku kunokusinceda isantya naziphi na iziphumo ezibi le iziselo kwi amazinyo akho.
ICEBISO! Zama ukutya iiorenji ukuba ufuna amazinyo akho ukuba khangela mhlophe. Ukwengeza, ukuphepha Nencindi iiorenji.
Thetha inkqubo ezingwevu ngezinyo. Musa mhlophe amazinyo akho emva kokuba ezikhangelwe mingxunya okanye nawuphi na umsebenzi wamazinyo.
Kufuneka usile amagqabi bay owomileyo luyadlubhuka orange ibe ngumgubo. Yongeza amanzi kule ibe luthuthu cebetshu kulo mxube. Ukwenza oku kuya kunceda kwakhona ukuthintela isifo seentsini kunye nemingxuma.
ICEBISO! Sebenzisa walnut umthi ngamaxolo mhlophe amazinyo akho. Thabatha isuntswana elincinane buvele bawahlikihle amazinyo akho.
Sebenzisa iperoksayidi yehidrojeni mhlophe amazinyo akho. Ungenza oku ngo nkxu indawo washcloth okanye nayiphi na into yomqhaphu lifakwe isisombululo. Hlikihla ilaphu sigqume kwimimandla amazinyo akho rhoqo. Lo pheroksayidi inceda amabala buwukhanyisela kwaye hlamba ilaphu iya kusebenza scrubber.
Amanye amayeza endalo kuya kunceda amazinyo mhlophe, ezifana apile cider iviniga. Le ndlela inceda ukuphelisa iintsholongwane kunye amabala emlonyeni wakho, njengoko lisihlambulule amazinyo akho kwinkqubo. Rharhaza kanye ngemini, ngokubanzi kusasa, kunye ngeviniga apile cider, yaye abuzise ngokuthi uxukuxe amazinyo akho.
ICEBISO! Hlamba amazinyo akho ngetyuwa. Ityuwa iyeza yimvelo UNGALUFUMANA UNCEDO lokuyigxotha le mdaka amazinyo akho.
iziselo Chase ichaphaza-ebangela ngamanzi. A iglasi Pura ngamanzi ithintela umdintsi ebangela othululwayo nasekutshoneni. Enye ingcamango kukuba ukusebenzisa straw xa usela iziselo ezimnyama-ezinemibala.
Hlamba amazinyo akho kunye amaxolo banana. Le nkqubo ilula kakhulu bangasukela, ngoko ke ukusebenzisa loo nto ibe yinto oyenza imihla ngemihla. Emva kokuba wachuba ibhanana, silubaleke Ixolo phezu amazinyo akho kanye phambi sivasa kwabo. Emva kokuba ukwenza oku, uhlamba amazinyo akho njengoko ngokuqhelekileyo. Oku kuya kukunika iziphumo ziwenza nangoko.
Sebenzisa icala ethambileyo le amaxolo orange ukuba bahlukane amabala kwaye wenze amazinyo akho. Unako kwakhona sukuxuba watsha Chuba orange kunye bay womsizi amagqabi ukwenza Cola ngenxa amazinyo akho. Qiniseka ukuba ukupulisha umlomo wakho ngocoselelo afterwords ukuya ukususa yonke iswekile iziqhamo.
Musa uphulaphule intlama ibango baza kukunika amhlophe mazinyo. Basenokuba kukunika nefuthe ezingwevu kancinane, kodwa baqonde ukuba ubuchule olongezelelweyo mhlawumbi kuyimfuneko. Ukuba nangoku ukhetha ukusebenzisa intlama ezingwevu, qiniseka ukuba umanyene yokubhaka kuyo.
Buza ugqirha wakho ukuba akunike ijeli nenokusetyenziswa ekhaya ukunceda mhlophe amazinyo akho akhangele mhlophe. Le ndlela unako ukwenza amazinyo yakho ezikhanyayo ukuya kwezisibhozo!
Ukuba uzama ukufumana amhlophe mazinyo, ndiye wamazinyo ukuba zi icocwe ngokufuthi kangangoko unako. cleanings zamazinyo rhoqo yenye ndlela isebenzayo ungaquka kwi ezingwevu yakho kwamazinyo kwirejimeni. Kufuneka ukutyelela ugqirha wakho cleanings ubuncinane qho ezintandathu kweenyanga.
Kufuneka uqinisekise ukuba yisaltbush ilungelo ukuhlamba kakuhle uhlobo yakho amazinyo. An ibrashi wombane ingakumbi kakuhle ekususeni ukubola mdaka emalunga amazinyo yonke imihla. Oku kuya kuba amazinyo akho icocekile kwaye mhlophe ngokwendalo.
Kufuneka ukuyicoca mhlophe amazinyo xa ulandela yonke imihla kunye yamazinyo kunye nokuvungula. Khetha iimveliso eziqulathe yokubhaka njenge ziwenza nto yendalo njengoko nto isebenza kakhulu xa amabala ekususeni.
Uyakwazi ukugcina mhlophe amazinyo akho ngokusebenzisa straw emva nayiphi procedure.Drinks ezingwevu kunye namanqanaba aphezulu zokutshintsh umbala ukuba unako angcolise amazinyo akho. Usebenzisa umququ uya kuthintela amazinyo ngaphambili yokuqhagamshelana ngqo ziikhemikhali nizikhwebule.
Yitya ukutya okusempilweni ukuba nohlaza. I abrasiveness ukutya nohlaza ungaphindi okucoca amandla amazinyo akho xa u hlafuna kubo. Ibalume iphela, musa ndozinqumla phezulu!
Uzenza intlama namaqunube ukuxukuxa amazinyo. Amaqunube sekukudala badumele ukuba mhlophe amazinyo akho. Ukuxuba amanye Cola ngokwakho, kuya kufuneka ukuba 1/4 nendebe yamanzi, Isoda yokubhaka (1/2 ikomityi) amaqunube ezintathu eziye eyo.
Musa ukutshaya icuba okanye icuba. Zombini ezi sele kubonakele ukuba discolor amazinyo akho ukuba ezinombala. Zama ukuyeka ukutshaya ukugcina amazinyo akho angabuyeli tyheli. Ukuba uyasokola ukuyeka ukutshaya, udibane ugqirha wakho iingcebiso okanye amayeza ukukunceda kwinkqubo. Kufuneka benikwe inkxaso HIV kunye nengcebiso eqinileyo.
kwezintsuku, Ufuna ngokwenene abanasiphephelo ngokundinyamezela ngoncumo yellow. Ungafumana uncumo eliqaqambileyo ngokusebenzisa enye ezininzi iimveliso ezingwevu amazinyo ilungiselelwe ukusetyenziswa ekhaya. Ikhithi ziwenza ungasebenzisa emakhaya ngaphantsi ibiza kakhulu ezingwevu Procedures amazinyo, kwaye enyanisweni kukunika isiphumo esifanayo.
Ngeposi yi mhlophe Amazinyo Guide - Isilimela 5, 2016 1:02 AM
iindidi: Lwasekhaya mhlophe Amazinyo tags: iziqhamo, Ndingathanda ipere yezinto zokukhafula kwiishethi, amazinyo ziwenza, iimveliso ziwenza, amazinyo ziwenza
amazinyo mhlophe kangako , Amazinyo izixhobo ziwenza , Ukubola ezingwevu iimveliso
Ukufumana amazinyo entle esikhazimlayo onephupha phantse wonke kwaye mhlawumbi nobakho. Ukuba amazinyo akho ahlale tyheli okanye enesiphene emva behlaziya rhoqo intlama elungileyo, kusenokufuneka usebenzise nayiphi na phezu iikiti counter amazinyo ziwenza rhoqo. Kukho iqela ndlela ibhetele mhlophe amazinyo kwimarike kunye intanethi zingakhetha. nokuba, bonke bephela azisebenzi kwangokunjalo ezingwevu amazinyo. ndlela ibhetele mhlophe amazinyo ukusebenza ngcono nangokukhawuleza, ngelixa iimveliso libya mhlophe amazinyo musa. Ukusebenzisa amazinyo generic izixhobo ziwenza ezifana izithebe umlomo, ezingwevu iingelosi, ezingwevu iziqwenga yinto entle ukwenza amazinyo akho amhlophe, kodwa izixhobo ezifana kusoloko kubashiya ziziphumo ebezingalindelekanga. Yiloo nto abantu abaninzi awufuni ukusebenzisa izixhobo ezifana. Ukuba ungomnye wabo ngoko zingakhetha amazinyo ekhaya ezingwevu ezifana ndlela ibhetele mhlophe amazinyo ngenxa yoko kangangoko kwaye ngokukhawuleza.
Kukho izizathu ezininzi, leyo enokwenza amazinyo akho ezinombala. ukuba ukutshaya isigarethe, nakwicuba, besela iwayini ebomvu, isoda, iti nekofu lungawenza amazinyo ezinombala. Ngoko ke, ukuze wenze amazinyo akho amhlophe, kufuneka ndiyeke imikhwa yokuqala. Inkqubo yendalo ekwaluphaleni amanye amayeza afana nezongezo zentsimbi, anezakhi, abanye antibiotics nazo kuchaphazela umbala amazinyo. Apha abanye kulula, ngokukhawuleza kwaye ndlela ingcono ukuba mhlophe amazinyo amayeza.
ndlela ibhetele mhlophe amazinyo
Ungasebenzisa amazinyo ikhaya imveliso ezingwevu ukuba ndlela ibhetele mhlophe amazinyo ukwenza amhlophe mazinyo. Loo mveliso lungangadli mali ininzi kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ngaphezu koko, ungasebenzisa iimveliso ezifana ngaphandle kokuya nawuphi wamazinyo yobungcali. A Ikhithi amazinyo ekhaya ezingwevu iza ngokubanzi kunye ngezithandelo ziwenza kunye gel umlomo. Kufuneka ukuba le ndawo ndlela ingcono ukuba mhlophe amazinyo iimveliso njengoko kwi amazinyo akho ngenxa japan ngcono. Ukuba ufuna isiphumo eyona ezilindelekileyo, kufuneka ugcine iimveliso lubekwa amazinyo akho phambi kokuba uye kulala ebusuku, ubuncinane 10 imizuzu. Kananjalo ufuna ukusebenzisa kubo rhoqo.
Omnye okulungileyo kodwa kuyabiza ndlela ibhetele mhlophe amazinyo ukhetho kukuba kutyelela kwigumbi wamazinyo ngayo. Le ndlela ngokukhawuleza kangangoko amazinyo ziwenza. Wamazinyo ufumana ngokubanzi uncedo nekhithi amazinyo isithambiso, laser ukukhanya kunye neengelosi amazinyo wamgalela kwi yetreyi emlonyeni (kumele ukuba zinxitywe naphambi kokuba uye kulala) ukwenza amazinyo yomguli mhlophe. A amazinyo yobungcali unyango ezingwevu ngokuphulukana ethile phakathi 250 USD kwaye 900 iUSD. Nangona lubiza kakhulu, kodwa inika nelilelona nokunyamezela.
Uyakwazi ukusebenzisa amazinyo ekhaya ezingwevu izinto ukuba zezona ndlela ibhetele mhlophe amazinyo ukwenza amazinyo akho eligqibeleleyo-free. Uyakwazi ukusebenzisa nesoda yokubhaka kwakunye nazo hydrogen peroxide ukwenza amazinyo akho amhlophe. Zombini ezi arhente isithambiso obalaseleyo ezisinceda ukuba unokuzenza njalo amazinyo. Olu nesoda yokubhaka na esirhabaxa ngokwendalo kwaye inceda ukususa amabala kunye tartars. Uyakwazi ukusebenzisa kubo ngokwahlukeneyo okanye ndawonye ngokwenza ngesithambiso omhle kubo. Unako kwakhona afafaze uwathandabuze nesoda yokubhaka phezu intlama ngexesha ihlamba.
Ngeposi yi mhlophe Amazinyo Guide - Isilimela 5, 2016 nge 12:21 AM
iindidi: Mhlophe Amazinyo Tips tags: ndlela ibhetele mhlophe amazinyo, kwigumbi wamazinyo ngayo, amazinyo isithambiso kit, amazinyo ziwenza, Ukubola ezingwevu iimveliso, amazinyo mhlophe